LACOSTE L! VE LAB, သင့်ရဲ့မြို့ပြဘက်အခြမ်းကိုထုတ်ပေးပါ
LACOSTE L! VE သည်၎င်း၏မြို့ပြနှင့်နည်းပညာအရအရှိဆုံးအားတီထွင်ထုတ်လုပ်လိုသည်။ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကသူ၏တင်ဆက်မှုပြီးနောက် ...
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ PS4 controller ကို
ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်သစ်များကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်ဤတွင်သင့်အား touch screen ပါသည့် Sony remote အသစ်ကိုပြသပါလိမ့်မည်။
High-end TagHeuer နာရီများ
ကောင်းသောနာရီများဝတ်ဆင်လိုကြသော ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား TagHeuer ၏အဆင့်မြင့်ကိုသင့်အားပြသသည်။
Abercrombie & Fitch မှခရစ္စမတ်အကြိုက်ဆုံး
၀ တ္ထုတိုများထဲမှယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည် reindeer sweater ကိုမဝတ်ထားပါကဂန္ထဝင်ခရစ်စမတ်မိသားစုပုံဖော်ထားသောမီးဖိုဘေးတွင်ရှမ်ပိန်မျက်မှန်များ၊ သန္ဓေသားလောင်းများ၊ လက်ဆောင်များနှင့်ခွေးတစ်ကောင်လုံးသည်လုံးဝပြီးပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပါ။ တဖန်သင်တို့သိကြ၏
Vintage Frames ကုမ္ပဏီမှ Las Vegas ရှိကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ရွံရှာဖွယ်မျက်မှန်များ
“ ရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းပြောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်။ ” Las Vegas မှာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဒဏ္myာရီဆန်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ အခုတော့ Vintage Frames Co. ရဲ့လက်နဲ့ Rapper Lil Wayne ရဲ့လက်ထဲကနေဂျွန်နီ Depp ရုပ်ရှင်မှာ ၀ တ်ထားတဲ့မျက်မှန်တချို့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ လျင်မြန်စွာ, 20 သာရှိပါတယ်။
PurificaciónGarcíaမှ V-neck ဂျာစီများ
အကောင်းဆုံးပုလ်အသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်ယခုရာသီအတွက်Purificación Garcia v လည်ပင်းဆွယ်တာအင်္ကျီများထက်သာလွန်သည်။
Zara သည် Rolling Stones နှစ် ၅၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုတီရှပ်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်
Mick Jagger နှင့်သူ၏လူများကပွဲနေ့များကျင်းပနေသည်။ The Rolling Stones သည်နှစ် ၅၀ ပြည့်တော့မည်။ Zara သည်၎င်းနှင့်အတူငွေရှာရန်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံလိုပါ။ ၎င်းအားပရိသတ်များနှင့် Rocker စတိုင်ကိုရှာဖွေနေသူများကိုနှစ်ခြိုက်မည့်တီးဝိုင်းအားဂုဏ်ပြုသည့်တီရှပ်များအားကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
မင်းကြည့်ချင်တာကို Miansai ဖက်ရှင်လက်ကောက်ကပိုကောင်းတယ်။
သင်ခေါက်ချင်သောနေကာမျက်မှန် ၄ ခု
သင်ခေါက်နေတဲ့နေကာမျက်မှန်လမ်းကြောင်းကိုမဝင်သေးဘူးလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုအချိန်မှာနေကာမျက်မှန်နဲ့ထွက်တာဟာမသင့်တော်ဘူးဆိုတာသိပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့နေရောင်မဝင်မှီအထိသူတို့နေရာလွတ်ယူပြီးသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆိုပြုချက်လေးခုကိုကြည့်ပါ။
Adolfo Dominguez မှလက်ကိုင်ပဝါများနှင့်ပဝါများ
ယခုဆောင်းရာသီတွင်သင်၏လည်ပင်းကိုနွေးစေရန် Adolfo Dominguez ၏ပဝါများနှင့်လက်ကိုင်ပုဝါများထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Selected နှင့်အတူကုမ္ပဏီ Jack & Jones မှအချက်အပြုတ်ဘွတ်ဖိနပ်၏အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုပြသသည်။
White Rabbit Saloon, Jack Daniel's ၏ကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေမှု
ဂျက်ဒဲန်နီယယ်သည်ဒဏ္legာရီအဖြူရောင်ယုန် Saloon ၏ ၁၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကိုအထူးထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်!
Zara မှကွဲပြားခြားနားသောဂျင်အင်္ကျီ ၃ ခု
Ray-Ban သည်ဖက်ရှင်သင်္ကေတဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ဂန္ထဝင် Aviator မျက်မှန်များနှင့်သူ၏ဒဏ္aryာရီဆန်သော Wayfarer တို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ပါကယခုသူ၏စွယ်စုံရအထင်ကရဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ခေါက်မျက်မှန်၌သူ၏တူညီသောမော်ဒယ်များ။
မည်သည့်မော်ဒယ်လ် ၂ ခုအနက်ကိုသင်ကြိုက်သနည်း။
ဒီနေရာမှာဒီဆောင်း ဦး ရာသီအတွက် Mango မိုးကာအင်္ကျီတစ်ထည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်။
တစ် ဦး cardigan ပေါင်းစပ်ရန်စိတ်ကူးများ 3
Cardigans သည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအင်္ကျီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာပထမလအတွက်ပြီးပြည့်စုံပုံရတယ်
ဒီဆောင်းရာသီအတွက်« Alpine »ဆွယ်တာအင်္ကျီ, ဂန္ဘယ်တော့မှမ
ဆောင်းရာသီရောက်သောအခါချောမွတ်သူများသည်အသွင်အပြင်တွင် ပို၍ ကြီးသောအခန်းကဏ္ take မှပါဝင်လာသည်။ သူတို့ဟာအဆင်ပြေတဲ့အဝတ်အစားတွေပါ ...
သင်၏အသားအရေကိုအမြင့်ဆုံးအထိထိန်းသိမ်းလိုပါက Hugo Boss ရေချိုးခန်းဂျယ်လ်များထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Daniel Craig ကြည့်ပြီး James Bond ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာပါစေ
နောက်ဆုံးပေါ်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင် Skyfall တွင်အကျော်ကြားဆုံးလျှို့ဝှက်အေးဂျင့် ...
ဟယ်လိုဝင်းအမျိုးသားJesús del Pozo အသစ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ
«ညမှာကိုယ်ပိုင်အနံ့ရှိပြီးမင်းအနံ့လား။ ၎င်းသည်ဒုတိယအရေပြားလားသို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါသလား။ Apple Martini ပေါ်လာသည်။
သင်လက်လွတ်မခံနိုင်သောအလွန်စွယ်စုံလက်ကိုင်အိတ် ၅ ခု
ကြည်းတပ်အစိမ်းရောင်, ဆောင်း ဦး ရာသီ၏အရောင်
3 သင်ဂျင်းဘောင်းဘီကိုရှာသည်၊ သင် ၀ တ်နေသောဂျင်းဘောင်းဘီများဘယ်လိုနေလဲ။
ကျွန်တော့်ဗီရိုထဲမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲတောင်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သေချာတာကတော့ဘောင်းဘီဆိုတာ ...
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီအတွက်ဆိုင်းငံ့ထားသူများ၊ သင်ဆိုင်းငံ့ထားသူများ ၀ တ်ဆင်သင့်ပါသလား။
သင်ဆပ်ပြာစီးများ ၀ တ်ဆင်နေပါသလား။ ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဝတ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ရမယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ လူများစွာအတွက်ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ...
သင့်အသားအရေကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်သလဲ။ ဒီနေ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုသွားမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပိုများလာရင်ငါတို့သွားမယ် ...
သူတို့အတွက် Corduroy ရှပ်အင်္ကျီများ
ဒီကျဆုံးခြင်းကိုပေါင်းစပ်ပြီးဆန်းသစ်သောအသွင်အပြင်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် corduroy ရှပ်အင်္ကျီများထက်မည်သည့်အရာကမျှပိုကောင်းသောကြောင့်ဤနေရာတွင်သူတို့အကြောင်းကိုပြောကြသည်။
Prada Levitate Wingtip ဖိနပ်
ယခုမကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအမျိုးသားများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အတွက် Homem အလှအပပစ္စည်းများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဤတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အား Versace မှလူအများစုအတွက်အလွန်ထူးကဲသောပုပုရနံ့အကြောင်းပြောပြပါသည်။
Kawasaki KS 450 F တောင်ပေါ်စက်ဘီးအသစ်
ဒီနေ့တောင်ပေါ်တက်ပြီး Kawasaki ကိုပျော်မွေ့ရန်အလွန်ကောင်းသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုသင့်အားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
ကျေနပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်
အမျိုးသမီးတစ် ဦး စိတ်ကျေနပ်မှုရလျှင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သင်သိရန်သင့်အားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အကြံဥာဏ်များများစွာလိုအပ်သည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား Kalenji ကုမ္ပဏီမှအကောင်းဆုံးအမျိုးသားအတွင်းခံအဝတ်အစားအချို့ကိုပြသပြီးသင်အမြဲတမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
ဘယ်လိုမော်တော်ဆိုင်ကယ် ဦး ထုပ်ကိုဖန်ဆင်းသည်
လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဦး ထုပ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်။
နွေရာသီ ဖြစ်၍ ပူပြင်းလွန်းသောအိမ်တွင် guests ည့်သည်များရှိပါကရိုးရှင်းသောစာရွက်တစ်ရွက်အတွက်အရသာရှိသောအသုပ်တစ်ခုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
ရောင်စုံ Sneaker များကိုမည်သို့ဝတ်ဆင်ရမည်နည်း
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိနပ်သည်ရုပ်ဆင်းသဏ္greatာန်နှင့်မည်မျှအရေးပါသည်ကိုမြင်တွေ့ရပြီး ... ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နွေရာသီအတွက် Caps နှင့် berets
အကောင်းဆုံးသော ဦး ထုပ်နှင့် berets သည်အကောင်းဆုံးသောနွေရာသီပုံစံကိုသင်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖက်ရှင်သည်သင်နှင့်အတူနေရာတိုင်းတွင်ရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံစံလုပ်ထားသောရှပ်အင်္ကျီများအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာမှာရင်ပြင်နှင့်အစင်းများ ဖြစ်၍ လွယ်ကူသည်။
Hemmed ဘောင်းဘီတွေဟာပိုပြီးလူကြိုက်များလာပြီးအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးများပါ ၀ တ်ဆင်လာကြပါတယ်။ အတွင်း…
၎င်းသည်ဘလော့ဂ်များနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များတွင်ရက်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကသုံးကြိမ်မြင်ရတဲ့နေရာ၊ နေရာအမျိုးမျိုးမှာတစ်ခုခုတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်
plaid blazer ကိုဝတ်ဆင်ရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
Blazers များသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သောအ ၀ တ်အထည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအနည်းငယ်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မယုံခဲ့ကြပေမယ့်မှန်ပါတယ်၊ သစ်သားနေကာမျက်မှန်တွေရှိတယ်။ Shwood တံဆိပ်သည်
သင်နေ့စဉ်မုတ်ဆိတ်မပါဘဲသင်၏မျက်နှာကိုဝတ်လိုပါကသင်၏ဆံပင်ရိတ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
Martin Miller မှ "The Perfect Gin Tonic" ကိုလက်ဆောင်ပေးသည်။
Swatch Gent သူတို့အဘို့နာရီ
Swatch Gent အမျိုးသားဝတ်နာရီအသစ်များ၊ ပြောင်မြောက်သောအရောင်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
ယခုနှစ်၏နောက်ဆုံးညသည်ရိုးရာဓလေ့များနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ တ ဦး တည်း ...
လက်ဆောင်များ - လက်ကောက်၊
အကောင်းဆုံး5အနိမ့်ကုန်ကျလေးကိုဆက်ဆံမှု
အကောင်းဆုံးအားကစားနာရီ ၅ ခု
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Swatch အတွက်ဂျယ်ရမီဖြစ်သူ Scott စုဆောင်းမှုအသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှစတိုင်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြော့၊ ဂန္ထဝင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အလွတ်သဘောထိတွေ့မှုရှိသည် ...
ခြေထောက်များကို hydrate လုပ်ရန်အိမ်လုပ်မျက်နှာဖုံး
အကယ်၍ သင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ကိုအံ့အားသင့်စေလိုလျှင်သို့မဟုတ်နောက်ပြီး Pendrive တစ်ခုပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် ၀ ယ်လိုပါကဤနေရာတွင်သင့်တွင်ကင်မရာပုံစံရှိသည်။
အသစ် Marc Jacobs နေကာမျက်မှန်
တီထွင်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းပညာရှင် Marc Jacobs သည်သူ၏အမည်ဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အဆိုပြုချက်အသစ်ကိုတင်ပြသည်။ ဒီကိစ္စမှာ,…
ခရစ္စမတ်ဖက်ရှင် 2011 ခုနှစ်: ခရစ္စမတ်ဆွယ်တာအင်္ကျီ
လက်ဝဲမှုနည်းပါးလာပြီ၊ ခရစ္စမတ်ဈေးဝယ်ထွက်ပြီးသားများများရှိသည်။ စတိုးဆိုင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် ...
အမျိုးသားများအတွက်တောင်းဆိုရန်အတွက် Lab Series Max LS
အကယ်၍ မက်စ် LS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရရင်၊ အဲဒါဟာ Lab Series ကုသမှုရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။
အလွန်အမင်းလွန်ကဲခြင်းမရှိဘဲသင်၏စတိုင်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာ - သူများအတွက် ...
Retro mobile နားကြပ်
ယခုအချိန်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းသည်ဖုန်းဟောင်းတစ်လုံး၏ပုံသဏ္,ာန်ဖြစ်သည့်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာပြီးမည်သူမဆိုအံ့အားသင့်စေမည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤတိုင်းပြည်ရှိအလှပဆုံးအမျိုးသားတစ် ဦး ၏ပုံပန်းသဏ္theာန်ဖြစ်သော Rafa Medina ရောက်ရှိလာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ...
ကုမ္ပဏီ Ganso ၏ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်သည်၎င်း၏ဖိနပ်ဖြစ်သော်လည်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အလောင်းအစားပြုလုပ်နေသည်။
Chuck Bass ကြည့်ပါ
ဒီရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် Chuck ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ချင်ပါသည်။
Inditex တီရှပ်များ - ကလေးဘဝသို့ပြန်သွားသည်
Inditex အုပ်စုစတိုးဆိုင်များသည်ယခုရာသီတွင်ကလေးဘဝကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။ ယခုဆောင်းရာသီ Pull & Bear, Blanco, Zara နှင့် ...
အမျိုးသားများအတွက်မိတ်ကပ် - Jean Paul Gaultier မှ Monsieur
အမျိုးသားများအတွက်သီးသန့်မိတ်ကပ်လိုင်းစတင်သည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Jean Paul သည်အမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်ပေးသောမိန်းကလေးဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများအတွက်ဗိုက်အောင့်ခြင်းများသည်ပွားများလာကြောင်းမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသော်လည်းသူတို့ပြောသလိုသူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း။ သူတို့အဲဒီလိုဖြစ်မှာလား ...
သင်ဤကျဆုံးခြင်းကိုဝတ်ဆင်ရန် Gucci မှခေတ်မီပြီး jovial ခါးပတ်ပုံစံနှစ်ခုကိုသင့်အားပြသမည်။
အလွယ်ကူဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့မျက်နှာဖုံးတွေထဲကတစ်ခုကတော့ Aspirin mask ပါ။ အထူးသဖြင့် ...
အကောင်းဆုံးတောင်တက်ဘွတ်ဖိနပ်၊ Asolo မှ Drifter Gv Mm
ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲတောင်တက်သွားနိုင်သည့်တောင်ကြီးမင်း၏ဖိနပ်ကြီးများ။
အမျိုးသားများအတွက်မိတ်ကပ် - မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းများအတွက်ဖုံးကွယ်ထားခြင်း
Nike က Rafa Nadal ၏ဖိနပ်ကိုပေးသည်
Rafa Nadal ကသူ၏တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲအသစ်အတွက်ကောင်းမွန်သောသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် Nike အတွက်ဖိနပ်အသစ်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
ဤနွေ ဦး ရာသီနွေရာသီ ၂၀၁၁ ရာသီအတွက်ခါးပတ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ကွဲပြားသောအဆိုပြုလွှာတစ်ခုရှိပါသည်။ အရာရာတိုင်းကိုချည်နှောင်ထားမည်မဟုတ်ပါ…။
El Ganso တံတောင်ဆစ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီ
El Ganso ဖက်ရှင်အသစ်သည်အနီရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်တံတောင်ဆစ်ပုံစံဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဂျာကင်အင်္ကျီများနှင့်အတူယခင်ကထက်ပိုမိုလှပသောကြည့်ရှုရန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
Chris Martin, Kevin Bacon, Antonio Banderas, Tom Cruise သို့မဟုတ် Javier Bardem တို့လိုလူသိများတဲ့မျက်နှာများ ...
ယခုအပူကိုညှစ်လိုက်သောအခါအဖြူရောင်အသွင်အပြင်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ဤအချက်ကိုသင်သတိပြုရမည်မှာရွှေဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
တော်တော်လေးကောင်းတယ် အီတလီကုမ္ပဏီ Gucci ၏စျေးနှုန်း၏အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါနည်းပညာဆက်စပ်ပစ္စည်းရောက်ရှိ။ ဤသည် quartz သူလျှိုနာရီနှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ဆောင်ပေမယ့်တကယ်ကိုအေးမြ။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုမိုသိကျွမ်းကြပါစို့။
အနီရောင်တံတောင်ဆစ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူအယ်လ် Ganso blazer
Ferrari ရဲ့နေကာမျက်မှန်, နောက်ဆုံးသွားဖို့နောက်ဆုံး
နောက်ဆုံး Ferrari အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Ferrari နေကာမျက်မှန်အသစ်။
အထီး stretch marks ။
stretch marks, ဗေဒ, လွယ်ကူသောချက်ပြုတ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, အစားအစာ,
Valentino Rossi အားဖြင့် Oakley Holbrook VR46
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသင်တို့အား၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာပြီးပါပြီ၊ လေယာဉ်မှူး Valentino Rossi သည်ကုမ္ပဏီ၏သံအမတ်သစ်ဖြစ်လာသည်။
သစ်သားထိကပေါက်နှင့်အတူ Gucci ခါးပတ်
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Gucci ၏ Gucci buckle silver, gold သို့မဟုတ်ပင်ဂမ်ပေါများသောဂဏန်းများအလှည့်အပြောင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအကြီးဆုံးအရက် - ဇိမ်ခံ limoncello
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချမ်းသာဆုံးသောရှမ်ပိန်များ၊ ဝီစကီများနှင့်တွင်းထွက်ရေများအတွက်ပင်ဗားရှင်းများကိုတွေ့ဖူးပြီးပြီဆိုလျှင်ဤအလှည့်သည် ...
လက်ဝတ်ရတနာတွေအထူးသဖြင့်စိန်တွေအတွက်ငါတို့ဘာမကောင်းတာလဲသိလား။ ဒီနေ့အခြားတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အခြားလူများနှင့်ပူးပေါင်းရန် ...
Binary LED နာရီ
နာရီဆိုတာသူတို့ဝတ်တဲ့သူတွေကိုထူးခြားတဲ့ထိတွေ့မှုပေးတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေပါ။ ဤအချိန်မှာ binary clock သည်အလွန်ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Inflatable Sumo, နည်းပြနှင့်စားဖိုမှူးဝတ်စုံ
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသာ costume, ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆူမိုနပန်းသာ costume, ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသင်တန်းပေးသူသာ costume, ငွေကြေးဖောင်းပွမှုစားဖိုမှူးသာ costume ငွေဖောင်းပွမှုမှာဝတ်စုံ, ဖန်စီစားဆင်ယင်, ရယ်စရာဝတ်စုံ, အကောင်းဆုံးဝတ်စုံ
ငါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Hollister ၏ဤတီထွင်မှုကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားမလည်ခဲ့ပါ၊ သူ၏အစ်ကိုလည်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
နွေရာသီဖိနပ်များစီးလျှင်ဖိနပ်စီးခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။ အလွန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်အေးမြဖြစ်ခြင်းအပြင် ...
လူတိုင်းလိုချင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကွန်ပျူတာကို Rolltop လုပ်ပါ။
ROLLTOP, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကွန်ပျူတာ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင်,
သင်ဖက်ရှင်ဖြစ်ချင်ပါသလား ထိုအခါ "Onitsuka ကျား" ကိုသုံးပါ
Uma Thurman, အဝါရောင် Onitsuka ကျား၊ Onitsuka ကျား၊ ဘီလ်ကိုသတ်ခြင်း၊ Quentin Tarantino, Onitsuka Tiger Mexico 66,
panties နှင့်ဘရာစီယာ, သကြားလုံး!
panties, knickers, thong, သကြားလုံး panties, သကြားလုံးဘရာစီယာ, သကြားလုံး bodice, သကြားလုံးဘရာစီယာ, သကြားလုံး Thong, သကြားလုံးအတွင်းခံ, မိန်းကလေးများအတွက်လက်ဆောင်
သငျသညျချောရှိသည်နှင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိကြသလော ဤပြproblemနာသည်ဗေဒဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုထက်ပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်ပြီး ... ဖြစ်လာနိုင်သည်။
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်း (အပိုင်း ၂)
နာကျင်မှုမရှိသော waxing အတွက်သိကောင်းစရာများ
သင့်ကိုယ်သင်မှန်မှန်ကန်ကန်မည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုလေ့လာရန်၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၏အခြေခံများမှစတင်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသည်။ ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းအဘိဓာန်ဖြင့် ...
Lacoste ကုမ္ပဏီသည် 'Sport Magnet' မှထုတ်လုပ်သည့်မော်ဒယ်လ်အသစ်များဖြင့်မျက်မှန်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အခုနွေ ဦး ...
အမျိုးသားများအတွက် Swarovski လက်ဝတ်ရတနာ
Light Light, အလင်းရောင် -In-the- မှောင်မိုက်ကွန်ဒုံး။
သင်သည်သင်၏မိန်းကလေးကိုအံ့အားသင့်စေလိုလျှင်သို့မဟုတ်ကောင်းသောအချိန်သာရလိုပါက Night Lights သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား ...
ယောဟနျသ Richmond retro မျက်မှန်
သားရေအတွက် Laredo က de Tumi စုဆောင်းခြင်း
ဤဆောင်းရာသီ - ဆောင်းရာသီရာသီအတွက် Tumi ကုမ္ပဏီ၏အလောင်းအစားတစ်ခုမှာ၎င်း၏ Laredo စုဆောင်းမှုဖြစ်ပြီး ...
ကျားသစ်ပုံနှိပ်ပါသည့် Zara ရှပ်အင်္ကျီ
Zara သည်အမျိုးသားများအတွက်စုဆောင်းထားသောကျားသစ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူရွှင်လန်းရန်အချိန်များစွာယူပြီးဖြစ်သည်။ အခြားနေ့က ...
လျှပ်စစ်သင်တုန်းနှင့် shaving မြှုပ်များယခုသဟဇာတဖြစ်ကြသည်
လျှပ်စစ်သင်တုန်းနှင့်သင်တုန်းအကြားထာဝရဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု။ အမြန်နည်းလမ်းရှာဖွေနေအမျိုးသားများ ...
shock absorbers ၏လည်ပတ်ပုံကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။
ကားတစ်စီး၏ shock absorbers များသည်ဘီးများအနီးတွင်တည်ရှိပြီး cushion သို့အစေခံသည်။
Super မှနောက်ထပ်ပွင့်လင်းမြင်သာသော frame
ထူးဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မော်ဒယ်လ်နဲ့အတူ Super နှင့်နေကာမျက်မှန်ကုမ္ပဏီကတော့ ...
Warby က Parker စပျစ်သီးကိုရှင်းလင်းသော Frame
အချိန်အတန်ကြာအားလုံးအနက်ရောင်နာရီကိုရှာဖွေခြင်းအပြင် (ငါနောက်ဆုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲအဖြစ် ... )
မင်းရဲ့ toupee ကိုဘယ်လိုဖြန်းရမလဲ
စိတ် ၀ င်စားသူအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆံပင်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ် ...
ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်းကို ၀ တ်ဆင်ရန်အပြင်းထန်ဆုံးလမ်းကြောင်းမှာ toupee ဖြစ်သည်မှာရှင်းပါသည်။ အများကြီး ...
Persol လား Ray-Ban လား။ သင်ရွေးချယ်
ဒီနေ့ခေတ်မှာရှေးခေတ်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုကနေရိုးရိုးနေကာမျက်မှန်တွေ၊ အထူးထင်ရှားတဲ့မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုအကြောင်းပါ။ ဘို့…
Schott-NYC မှပြီးပြည့်စုံသော Marlon Brando လီမိတက် Edition ကို
၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရန်အလုပ်လုပ်သည့်အကျီင်္တီထွင်ရန်စိတ်ကူးဖြင့်ထုတ်လုပ်သူ Irving ...
Zara အားဖြင့် Cowboys များအတွက် Poncho
အခုယူပါ။ တစ်ယောက်က blog တွင်မှတ်ချက်ပေးရန် Zara online store မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးမှတ်သားလောက်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာနေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်နို့ကိုအစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း Aloe Vera Deliplús
အလှကုန်ပစ္စည်းလောကရှိအရာခပ်သိမ်းသည် Biotherm Homme သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သော“ ပုံမှန်” ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ထိပ်တန်းအဆင့်သို့မသွားပါ။
Zara အိမ်အသုံးအဆောင်ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ 2010-2011
အမှန်တရားကတော့ Zara ဟာသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးကို ၀ င်လာတဲ့အချိန်မှာညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီတိုရောင်းတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။
သင်ပြတင်းပေါက်များပိတ်ဆို့ပြီးသူတို့ကိုမည်သို့မြင်နိုင်အောင်သင်မသိခဲ့ပါ။ TO …
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ဒီမှာတွေ့ခဲ့ပြီးသောရှည်လျားသောစာရင်းထဲတွင်နောက်ထပ်တစ်ခုလုံး။ အသစ်တစ်ခုအကြောင်းပါ။
ငါအိတ်များသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းထားသောအမျိုးအစားများနှင့်၎င်းတို့၏တ ဦး တည်းအဘို့, အခါအားလျော်စွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ငါအားနည်းခံစားရတယ် ...
Mango မှ HE အသုံးပြုပုံစံအဖြစ်ဖုန်မှုန့်တီရှပ်
တီရှပ်ကို ၀ တ်ဆင်ပြီး ၀ ယ်နိုင်သည်ကိုအဘယ်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်းနေရသနည်း။ ဒီလိုမျိုး ...
Zara မှ David Bowie တီရှပ်များ
Zara သည်၎င်း၏ Casual လိုင်းတွင်စွယ်စုံသုံး David Bowie ပါဝင်သောတီရှပ်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ A ...
Zara သို့မဟုတ် H & M? သင်ရွေးချယ်
ယနေ့ခေတ်အမှုအရာများသည်ဈေးချိုသောစတိုးဆိုင်များ၊ အထူးသဖြင့်အဓိကဆိုင်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ပါယာ၏အဓိကပိုင်ဆိုင်ရာ Zara ...
ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီး, Gisèle Denis နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သာအိတ်ထဲတွင်ကောင်းသောနေရောင်ကာကွယ်ဆေး (သို့) ပို၍ ပင်လက်သင့်နေသင့်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင့်မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင် ...
အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအရေပြား: Nivea နှင့် L'Oreal
အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်သူ့ဘဝတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုရှိပါကသူတို့သည်အမျိုးသားများအတွက် Nivea ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
Harmont & Blaine သည်မက်ဒရစ်တွင်စတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်သည်
နွေရာသီမခြားမလပ်ချဉ်းကပ်နေသည်။ နေ့တိုင်းပူနွေးလာသည် (အနည်းဆုံးဤတွင်ဗလင်စီယာရှိ) နှင့်တစ် ...
Rolex ရေငုပ်သင်္ဘော, မယှဉ်နိုင်တဲ့တိုးတက်အောင်?
ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလုံးဝတန်ဖိုးထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတန်ဖိုးထားမှုများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ရာသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုအတွက်ဝန်ခံရန်ဖြစ်သည်။
ဂျယ်ရမီဖြစ်သူ Scott နှင့်သူ၏သမိုင်းမတိုင်မီစုဆောင်းမှု
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီစုဆောင်းမှုကိုဂျေရမီဖြစ်သူ Scott ၏မှုတ်သွင်းခံအစုအဝေးမှရရှိခဲ့သည်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ A Bathing Ape သည် BAPE ဟုလူသိများသောအွန်လိုင်းစတိုးကိုဥရောပတိုက်ကြီးအတွက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ဒီခရစ်စမတ်အတွက်လက်ဆောင်များစာရင်းကိုစဉ်းစားနေတုန်းပဲ၊ ဒီနေ့အတွက် ... အတွေးအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြနေပါတယ်။
Perfume Academy မှရရှိသောအကောင်းဆုံးအမွှေးအကြိုင်များ
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Perfume အကယ်ဒမီသည်ဆုချီးမြှင့်သည့်ဆုများကိုပေးအပ်ရန်မက်ဒရစ်တွင် Gala ကျင်းပခဲ့သည်။
Fred Perry စည်အိတ်
Fred Perry သည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသောအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်မကြာခဏသူအားကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေကြောင်းဝန်ခံပါမည်။
သူ Mango ဥရောပဂျာကင်အင်္ကျီအားဖြင့်သူ
ငါမဂို၏အမျိုးသားများဖြစ်သော Homini Emerito သို့မဟုတ် HE ၏ပုံမှန်ဖောက်သည်မဟုတ်ပါ။
Ray Ban Wayfarer ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသည်
ရာသီ၏နေကာမျက်မှန်မော်ဒယ်ဖြစ်သောဒဏ္Rayာရီဖြစ်သော Ray-Ban Wayfarer ကိုယခုအသစ်သောစုဆောင်းမှုတွင်တင်ထားသည်။
ပါးလွှာသော၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိခြင်း၊ အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ရမည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
တစ် ဦး တည်းနေထိုင်ရန်သွားသောယောက်ျားများစွာသည်နှစ်သိမ့်မှုမရသဖြင့်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရသည်။
Hombres Con Estilo တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူစခန်းချခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးတီထွင်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားဆက်လက်အသိပေးသည်။
Louis Vuitton နာရီကိုင်သူ
ခရီးသွား most ည့်သည်အများဆုံးများအတွက် Louis Vuitton ဖန်တီးခဲ့သောကျယ်ပြန့်သောစကြဝuniverseာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလိုင်းကိုရှာသည်။
လူးဝစ် Vuitton အထောက်အထား
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Louis Vuitton အားနေကာမျက်မှန်အချို့ဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျွန်တော်စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
Goldstriker International မှဒီဇိုင်နာ Stuart Hughes သည်အဓိကအားဖြင့် ... အရာအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ပေးသောကြောင့်ကျော်ကြားသည်
COS, H & M ၏အများဆုံးသီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်, က၎င်း၏ပထမဆုံးစပိန်စတိုးဖွင့်လှစ်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပြီးပါပြီ၊ H & M ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအမှတ်တံဆိပ် COS (Style of Collection) သည် ...
BarGoGo Transformer၊ ဇိမ်ခံပုလင်းများ
Time Force Rafa Nadal ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသည်
Pau Gasol နှင့် Elsa Pataki ကဲ့သို့ Time Force အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်များ၊ တင်းနစ်ကစားသမား Rafa Nadal သည်သူ၌ရှိသည်။
ဆံပင်ရိတ်ခြင်းသည်ယောက်ျားများတစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ မင်းသိချင်ရင် ...
ရှက်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေလိုပဲရှက်တတ်တဲ့မိန်းမလည်းရှိတယ်။ အဖြေနည်းနည်းလေးသာဖြေချင်ပေမယ့်ဖြေချင်တဲ့ရှက်တတ်တဲ့မိန်းကလေး ...
သင်၏ကားဘက်ထရီကိုကြာရှည်ခံစေရန်၊ ကောင်းမွန်သောလျှို့ဝှက်ချက်မှာ၎င်းကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်စေရန်နှင့် ...
အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုအနိုင်ရလိုသည့်အခါများစွာသောအရာများကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။ ထိုကြောင့်ယောက်ျားနှင့်အတူ ...
မကြာသေးမီကသုံးဖက်မြင် (3D) ရုပ်ရှင်ရုံများသည်ဖက်ရှင်ကျလာသည်။ မင်းအဲဒီရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားရင်သူတို့ ...
သင်သည်သင်၏အခန်း၏နံရံများပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအရောင်ဖြူသို့မဟုတ်သင်အရောင်ရင့်နေပြီလား။ သင်ထင်လား ...
Rafa Armero မှမော်တော်ဆိုင်ကယ်သံခမောက်လုံးကိုင်ဆောင်ထားသူ
လူများစွာသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းအတွက်စတိုင်ကျသောဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းခွက်ကိုလှူဒါန်းရန်ရွေးချယ်နေကြသည်။ သံခမောက်လုံး ...
Valencia ရှိ F1 အထူး: Paella နှင့် horchata
စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ စျေးဆိုင်တွေအကြောင်းပြောပြီးပြီ။ အခုတော့အကြောင်းအရာတွေပြောရမယ်၊ paella နှင့် horchata, gastronomy စကားလုံးနှစ်ခုအတွက်အကျဉ်းချုပ်။ မဟုတ်ပါ
Valencia ရှိ F1 အထူး: အလယ်ဗဟိုတွင်စားသည်
Valencia ရှိ F1 အထူး: Poeta Querol
Valencia ရှိဇိမ်ခံကားကြီးများဆိုင်များနှင့်လမ်းမပေါ်နောက်တစ်နေ့တွင် Calle Poeta Querol ကိုငါပြီးသားအမည်ပေးခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ...
သင်ကားထဲတွင်လမ်းလျှောက်နေသည်နှင့်ရုတ်တရက်အတွင်း၌ဆူညံသံအချို့ကြားရသည်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် ...
F1 အထူး Valencia တွင်ဗဟိုတွင်စျေးဝယ်ခြင်း
Valencia သည်၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်သော menswear စတိုးများကြောင့်ကျော်ကြားသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ရှိပါသည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ကျောင်း၌ဖြစ်စေသူ၏အတန်းဖော်ကိုတစ်ခါမှမဆွဲဆောင်ခဲ့ပါ။
CR7, Cristiano ရော်နယ်ဒို၏လက်မှတ်
Cristiano Ronaldo လိုဝတ်စားချင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူ့ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် CR7 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှတ်စုစာအုပ်များ၊ netbook များ၊ လက်တော့ပ်များသို့မဟုတ်စူပါဖုန်းများအပြင် PDAs သို့မဟုတ် iPhone များကကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ခုခုပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကာတွန်းဝါသနာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင် setting များ၊ အက္ခရာများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
ပညာတတ်လူသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ဤပဝါခေါင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဒီကျဆုံးခြင်း / ဆောင်းရာသီအတွက် Louis Vuitton အိတ်များ
“ …” မှုတ်သွင်းထားသောဒီဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်ဆောင်းရာသီအတွက် Louis Vuitton အမျိုးသားအိတ်စုဆောင်းခြင်းကိုနောက်ဆုံးတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
လေယာဉ်ပျက်ကျခြင်း၊ ပြန်လည်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ခြင်းတို့ကသင်၏မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုမီးစွဲလောင်စေနိုင်သည်။
အချို့သောအမျိုးသားများသည်မိမိတို့ဆံပင်ကိုမည်သို့ခြောက်သွေ့ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ပြသနာကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသင်ယူ ခဲ့၍ သော်လည်းကောင်း၊
Abercrombie & Fitch သည်စပိန်တွင်အစွန်းရောက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
COOGI, purists များအတွက်ဂျာစီ
ဓာတ်ပုံထဲမှဆွယ်တာကိုတွေ့သောအခါများစွာသောသူတို့သည်ဒဏ္classicာရီဆန်ဆန်ရုပ်ပြဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်ဘီလ် Cosby ကိုသတိရလာလိမ့်မည်။
ယခုရာသီတွင် ဦး ထုပ်များနှင့်ထုပ်များကိုလောင်းပါ
ဦး ထုပ်ဖက်ရှင်အတွက်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ခေါင်းကိုသူတို့အောက်၌ဖုံးကွယ်ထားသည့်အကြောင်းရင်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေ (မကောင်းပါ ...
Emporio Armani ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏စုဆောင်းမှုအသစ်
နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီ Empori Armani သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်နွေရာသီရာသီအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်များအားဖြန့်ချိသည်။
အင်္ဂလိပ်ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၊ သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (သို့) အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်တွင်ဤအထူးသဖြင့်ဇာတ်ကောင်များ၏အပြုအမူအကြောင်းပုံပြင်မည်မျှသိသနည်း။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာသူတို့လုပ်ထားပြီးသား ...
metrosexuality နှင့်ယောက်ျားများသည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုသိရှိလာသည်ဟူသောအချက်ကို ဦး တည်သည်။
မည်မျှပင်ခေတ်မီသောပြောင်သောအမျိုးသားများ၊ အလွန် sexy သည်ငါတို့မိန်းကလေးများ၊
၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အထီးဗေဒ၏အခြေခံအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များရောက်ရှိပြီးနောက် ...
ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာများကိုဆပ်ပြာရေနှင့်ဆေးကြောရန်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရန်နှင့်အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားရန်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ...
တစ် ဦး ပဝါကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ
ငါနေတဲ့နေရာမှာအေးမြတဲ့နေ့တွေစတင်နေပြီ။ ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုပဝါဝတ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် ...
Culotte, Thong သို့မဟုတ် Panties? ငါတို့ဘာကိုပိုနှစ်သက်သလဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖို့အမျိုးသမီးတွေဟာအတွင်းခံကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ အတွင်းခံအမျိုးအစားများစွာရှိသည်: panties, culottes or thong ။ မှာ…
Susan Rosen ကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒီပြပွဲမှာကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံး bikini ဖြစ်သည်။
တစ် stye ပျောက်ကင်းစေခြင်းငှါသိကောင်းစရာများ
တစ်ခါတလေမနက်ခင်းမှာနိုးလာတဲ့အခါပုံမှန်နေ့တစ်နေ့မှာကျွန်တော်သယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်သင့်သည် ...
Dockers သည်၎င်း၏နွေ ဦး ရာသီတွင်ပိုမို "စပျစ်သီးကို" လောင်းနိုင်သည်။
Dockers ကုမ္ပဏီသည်အနှစ်သာရကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းနေစဉ်နွေ ဦး ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူကမ်းလှမ်းချက်များကိုချဲ့ထွင်သည်။
၎င်းသည်ဝတ်စုံအသစ်တစ်ခုကိုအသစ်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်ဖြစ်စေရန်ဖြစ်စေ၊ များသောအားဖြင့်ယောက်ျားများစွာသည်လက်ကိုင်ပဝါကိုတင်လေ့ရှိသည်။
ချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်ဘဲ pleated ဘောင်းဘီ။
Tag Heuer ဖော်မြူလာ ၁ Indy 1၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နာရီ
တစ် ဦး ကပရော်ဖက်ရှင်နယ် skydiver ဒီအားကစား၏အလေ့အကျင့်စတင်ပုံကိုပြောပြသည်။ "ငါအားကစား skydiving လုပ်ခဲ့တယ်, တစ်ကြိမ်တွင်ငါ ...
နောက်ဆုံးတွင် SK-II ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီသစ် ...
ကွဲပြားခြားနားကော်လာနှင့် cuffs နှင့်အတူရှပ်အင်္ကျီ
လွန်ခဲ့သောရာသီအနည်းငယ်ကငါတို့ရှိသမျှသည်အရောင်နှင့်ပုံစံများရှိသော်လည်းသူတို့၏ cuffs နှင့်ကော်လာများနှင့်အတူအံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။
ကားတစ်စီးသည်တစ်ဖက်သို့သွားလျှင်သို့မဟုတ်တာယာသည်မညီမညာဖြစ်နေသည်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာတယ် ...
အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားများကိုမပျော်စေသည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသည်။ အမှန်တရားကတော့…
ယနေ့တွင်သင့်အား Cristiano Ronaldo ၏ဆံပင်ပုံစံများကိုသင်ပြသနေသည်။ ၎င်းသည်အချို့၏ရှေ့ပြေးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် ...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ AX deodorants သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်သူတို့၏စောင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကိုပျက်စီးစေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ...
သင်ဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လက်ဆောင်ကိုမဆိုဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေပေးရမလဲဆိုတာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်မသိဘူး။ သူတို့အတွက်…
ဒီနေ့ Utilikilt စကတ်များကိုသူတို့ရဲ့ပျော့ပြောင်းပြီးကြာရှည်ခံစေတဲ့ poly-cotton နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဟိုက်ဒရောလစ်စတီယာရင်ဖြင့်ကားတစ်စီးပိုင်ဆိုင်သူများသည်စတီယာရင်ကို“ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်” ဖွင့်နိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ သို့သော်…
ပြင်သစ်၊ အီတလီသို့မဟုတ်နယူးယောက်ရှိလမ်းပေါ်ရှိလူများ၏ပုံစံသည်အထူးဖြစ်ကြောင်း၊ ငါတို့အားလုံးသိသည်။
စတိုင်ကျသောလူတစ်ယောက်သည်လှေများ၊ သူတို့၏အမျိုးအစားများနှင့်ဝေါဟာရများနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံအရာများကိုသိရန်လိုသည်။ အဘယ်သူမျှမ ...
၁၇ လက်မရှိ MacBook Pro အသစ်
၁၇ လက်မ MacBook Pro ဘက်ထရီသည်အားသွင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ၈ နာရီကြာခံနိုင်ပြီးအားသွင်းနိုင်သည်။
ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာမလုံခြုံမှုဆိုတာနေ့စဉ်ကိစ္စတစ်ခုပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမြဲတမ်းလုယက်မှု ...
ပလတ်စတစ်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ထိုင်ခုံများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုန်သွားတတ်သည်။ အစဉ်မပြတ်ပေါ်မှာထိုင်နှင့် ...
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မရိတ်မီစင်ကြယ်သောရိတ်ခြင်းကိုမည်သို့ရနိုင်မည်၊ ငါတို့မခေါ်မီ ...
Tattoos တွေဟာ Neolithic ခေတ်ကယူရေးရှားဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှေးခေတ်က ၆၀၀၀ အထိရှိတဲ့ Mummy အချို့မှာတောင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မိမိကျွမ်းကျင်သည်ဟုထင်သောအလွန်မသိသောကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ငါတို့သွားမယ် ...
အကယ်၍ သင့်တွင်ဝက်ခြံပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ဝက်ခြံများရှိပါက၎င်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအစက်အပြောက်များကိုရှောင်ရှားရန်ပန်းသီးသို့မဟုတ် antioxidant တစ်ခုခုထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။
Pre- ရိတ်ရေနံ, အဘယ်ကြောင့်သုံးပါ?
သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ဖူးပြီးသင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ။
အမျိုးသား၊ Warren Buffett၊
Warren ဘတ်ဖတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၆၂ ဘီလီယံခန့်ပိုင်ဆိုင်သည်။ မွေးဖွားခဲ့သည်…
iPod ကို ၁၉၇၉ တွင်တီထွင်ခဲ့သည်
British Kane Kramer သည် iPod ၏မူလဒီဇိုင်နာဖြစ်သည်။ Kramer ၏သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည် 1979 ခုနှစ်တွင် ...
ဆာဗာ: ဆာဗာကိုကြည့်ပါ။ Star Ring Topology Star Topology ကြယ်ပွင့်အစုအဝေးနှင့်ကြယ်တာရာအစုအဝေးများတွင် node များက ...
WaveBox - လက်တွေ့ကျတဲ့ခရီးဆောင်မိုက်ခရိုဝေ့
Twisted pair - သီးခြားကြိုးနှစ်ချောင်းပါ ၀ င်ပြီး encapsulated ...
ဒီနေ့ HombresconEstilo.com မှာခေတ်သစ်အမျိုးသားများအနေဖြင့်လည်ချောင်းထုံးခြင်းများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင့်အားသင်ပေးပါမည်။ သူတို့က: အ ...
LAN - ဒေသဆိုင်ရာကွန်ယက် (သို့) ဒေသတွင်းကွန်ယက် - ဒါဟာပထဝီအနေအထားအရအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ဒေတာဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်၊
ဟက်ကာ - ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်။ လက်ကိုင် - ကိုင်ထားနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ကွန်ပျူတာ ...
ငါထင်တာကတော့တစ်ရက်ကျတော့ငါတို့ lycra ခြေကျင်းဝတ်ဆင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပေမယ့်အဲဒီနေ့ရောက်လာပြီ။ The …
Backup - ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်း။ ၎င်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များ၏အရန်ကူးကော်ပီတစ်ခုဖန်တီးရန်အချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ - တာယာများ
၁။ ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပြီးနောက်စက်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျဖြတ်တောက်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းတို့အားရွေးချယ်စရာမှဖြုတ်လိုက်ပါ။
သင်ကင်လုပ်လိုပါသလား? သင်၏ညစာစားရန်အတွက်လတ်ဆတ်သောဘီယာ၊ အသားနှင့်အေးခဲနေသောအချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့…
စျေးကွက်ထဲမှာဖိနပ်အနည်းငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုကြီးထွားလာအောင်လုပ်လာတယ်။ Bugarri ဖိနပ်ကုမ္ပဏီ…
အလှကုန်ကုမ္ပဏီ Clinique သည်အမျိုးသားများ၏အသားအရေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလှကုန်များသို့ဘာသာပြန်သည်။
အပြာရောင် Seduction, မွေးဖွား seducers များအတွက်ရေမွှေး
သိတဲ့အပြုံးများ၊ မရည်ရွယ်ဘဲပွတ်တိုက်မှုများ၊ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အချိန်တွင်အရင်းအမြစ်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသည်။
လူကြီးလူကောင်းလိုပဲရိတ်ပါ။ အပိုင်း 1: အဆိုပါ Brush